ikhaya AMERICAN STARS UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Oktobha 16, 2019
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold. Imboleko yeMoto yeTheun kunye neeBesthqWallPapers
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Nelli". Ibali lethu likaGabriel Martinelli Ubuntwaneni kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuvuka kukaGabriel Martinelli. Ityala kwi indlu yezixhobo zemfazwe, Ibhola yeLondon kunye Ilanga
Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala / imvelaphi yakhe yintsapho, imfundo / ukwakha umsebenzi, ubomi bomsebenzi wasemva kwexesha, indlela eya kudumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubomi bobuhlobo, ubomi bomntu, iinyani zosapho, indlela yokuphila kunye nezinye iinyani ezingaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungomnye wolutsha olukhula ngokukhawuleza ukuba luphume eBrazil kumaxesha akutshanje. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-biography kaGabriel Martinelli enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguGabriel Teodoro Martinelli Silva. UGabriel Martinelli njengoko abizwa njalo wazalwa ngomhla we-18th kaJuni 2001 kunina, (igama losapho: uSilva) noyise, UJoao Martinelli eGuarulhos, eSão Paulo, eBrazil. Fumana ngezantsi ifoto yabazali bakaGabriel Martinelli ngokunokwenzeka abaneminyaka ephakathi kwe-50's ngexesha lokubhala.
Dibana noGabriel Martinelli Bazali.— Mnu no Mnu UJoao Martinelli. Ikhredithi kwi-IG
UGabriel Martinelli onemvelaphi yentsapho yakhe evela eGuarulhos. Lo ngumasipala waseBrazil kunye nesesibini isixeko esinezona ndawo zinabantu abaninzi kwisithili saseBrazil iSao Paulo. Ubusazi?… Ubuye neengcambu zentsapho yakhe ukusuka e-Italiya ngoyise uJoao Martinelli.
Uninzi lweenkwenkwezi zebhola eBrazil azizange ziphinde ziphila ubomi obutyebileyo ngaphambi kokuba zifike kwisardard kwaye uGabriel Martinelli wayengenguye owahlukileyo njengoko wayevela kwimvelaphi yosapho eyaphukileyo okanye ehluphekayo. Njengabathandi bebhola (okuthandwa ngu URoberto Fermino kwaye UGabriyeli uYesu), waziswa kukuzabalaza ezitratweni kwangaphambi kokuba abize igama lakhe ngokufanelekileyo. Intsapho kaGabriel Martinelli yayihlala kuyo Enye yezona ndawo zihlwempuzekileyo eGuarulhos, eyinxalenye yesixeko esinconyelwa kuphela ngokuvelisa abantwana abaneetalente football. UGabriel Martinelli wayidlala ibhola ekhatywayo.
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Njengomntwana, uGabriel Martinelli wayengenamdla kwizifundo zakhe kwaye wayenandipha nje ukudlala ibhola. Ukuba benoloyiko lokuba ukhuphiswano lomdlalo webhola likhulu ngokumbalwa okulenzayo, abazali bakaGabriel Martinelli kwafuneka bakhethe ukuba unyana wabo afumane imfundo ngokusesikweni ngokufundisa ekhaya.
Isifundo sikaGabriel Martinelli saqala ngoFutsal. Njenge Philippe Coutinho phambi kwakhe, ulawulo olusondeleyo lukaMartinelli kunye neenyawo ezikhawulezayo zazalwa ngokudlala i-futsal. Emva phaya, amasimi asekuhlaleni IGuarulhos yasebenza njengembiza yokunyibilikisa yabaselula abahlanganisa rhoqo ngokuhlwa badlale ibhola.
Amabala endawo eGuarulhos- Apho Ibhola yeBhola yaqala khona uGabriel Martinelli. Ityala lemifanekiso: Ilanga
UGabriel Martinelli kwasekuqaleni wayenazo iintsikelelo zabazali bakhe ngokuhamba kwexesha, besula ukuthandabuza kwabo, wayesazi ukuba unetalente kwaye unokwenza into ebholeni. Njengomqhubi osemtsha, uMartinelli wafunda ukurhweba njengamaFutsal njengolukhuni, esiya phambili ngokuthe ngcembe.
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
Ukusukela kwiminyaka yesithoba ubudala, umntwana oselula wabizwa ngu Iqela le-futsal ebemmemele kuvavanyo. UMartinelli iphumelele intliziyo yomqeqeshi wakhe ngelixa lokulingwa, ifilimu eyambona ukuba uqeshwa kwiqela. UMartinelli wayekhawuleza ukwenza umbono kunye neqela laseCorin's Futsal. Ubusazi?… Wafaka amanqaku e-66 kwiCandelo leNtshatsheli ye-Metropolitan Championship kunye nezinye iinjongo ze-56 kwi-State Gold Series - wenza iinjongo zakhe ngeli xesha I-122 iyonke.
UGabriel Martinelli Ubomi bokuqala kunye noFutsal. Ukuyeka umdlalo kunye neeNjongo ze142. Ikhredithi: I-towerHamlets
Ukusuka kwi-2012, ukudlala ibhola emasimini kwaye hayi uFutsal yaba yinto ephambili kuye. Ngaphambi kokushiya iFutsal yebhola ebaleni, uMartinelli wafumana amanqaku ongezelelweyo e-20 esenza i-142 yexesha. Ngebhola ekhatywayo, uMartinelli ukora amanqaku e-63. Ngexesha lokufikelela kwiinjongo ze-202 ze KwabaseKorinte, wahlutshwa kwaye wabizwa ngelo xesha Iqela lesithathu leqela laseBrazil I-Ituano FC ngonyaka we-2015.
Ngelixa e-Ituano FC, uGabriel Martinelli uqhubeke nokuchukumisa umqeqeshi kunye nabalandeli bakhe. Ubusazi?... Kuba wayelungile, lo mntwana uselula wolahleko oboniswe ngezantsi, waphula irekhodi lokuba ngumdlali omncinci wokugqibela kwi-Ituano.
Ubomi boMsebenzi obusebenza kwangoko uGabriel Martinelli. Ityala lemifanekiso: Ibhola yeLondon
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Ukusukela kwetyala, uMartinelli waqhubeka ebonisa isithembiso esincinci kangaka, esitsala iingxilimbela zaseYurophu zomdlalo (Man Utd, Barcelona, ​​Real Madrid). Ubusazi? Kuzo zonke iingxilimbela zaseYurophu, yayinguManchester United owamvavanya kuqala, emmemela kwizilingo. Ngexesha lokuvavanywa, uGabriel Martinelli wadlala kwicala elinye lolutsha njengoko Mason Greenwood. Ngelishwa, iManchester United yamgatya nangona yayineemvavanyo ezine zokubanika umdla. Phambi kokuba umke eManchester uyokufumana amadlelo aluhlaza kwenye indawo, Paul Pogba Ndidibene neBrazil elahlekileyo. Ngamazwi kaMartinelli;
“Ngenxa yenkangeleko yobuso bam, uPogba wayesazi ukuba ndinguBrazil. Ubuzile ukuba yonke into ilungile nam na apho bendidlala khona. Ndamxelela yonke into eyenzekileyo emva koko, wandivumela ukuba ndithabathe isithombe kunye naye. Uye wandijonga ngexesha lam apho ”
UGabriel Martinelli waye wakhathalelwa nguPaul Pogba ngexesha lokulingwa kwakhe ne-United. Ityala: Ilanga
Emva kwetyala elingaphumelelanga kunye neManchester United, iBarcelona yagqiba ekubeni ivumele uGabriel Martinelli ukuba aqeqeshe kwizifundo zabo ezikhulu zaseLa Masia kwezinye ukuze bambukele ngaphambi kokwenza isigqibo sokumsayina.
“Uqeqesho lwam noLa Masia yenye yamava ebalaseleyo endikhe ndanawo ebholeni. Ngaphandle kokuba yenye yezona zifundo zibalaseleyo kwihlabathi, inqanaba loqeqesho liphezulu kakhulu kwaye indenze ndakhula kakhulu ebholeni.”Utshilo uMartinelli.
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
Ukuze enze igama elikhulu kunye nelinokuhlonitshwa igama lakhe, uGabriel Martinelli wagqiba ekubeni abuyele eBrazil, eqhubeka neklabhu yakhe i-Ituano FC. Elo thuba lafuneka ukuzenzela igama lafika xa wakhethwa ukuba athathe inxaxheba kwi-São Paulo State Championship.
Ubusazi?… UGabriel Martinelli waqala ukuchuma njengoko wayeneyona midlalo intle kakhulu kolu khuphiswano. Uncede ukukhokela u-Ituano FC ekuwineni amabakala eqela kunye nokufikelela kwikota-fainali yonke ngenxa yeenjongo zakhe ezimangalisayo.
UGabriel Martinelli Rise ukuya kuDumo- Apha, ubhiyozela injongo kwi-Sao Paulo Tourmet. Ityala kwibhola yebhola kwiLondon
Ukusebenza kukaGabriel Martinelli kwamenza ukuba abe kwindawo entle kwinkampu yoqeqesho yeqela laseBrazil kwi-pre-Copa América ekampini kaMeyi 2019. Ithetha ntoni le nto?. Kuthetha ukuba wakhethwa ukuqeqesha ecaleni kokuthandwa kwe Neymar, Coutinho kunye nabanye abadlali abaphezulu baseBrazil.
Ngokuthatha inxaxheba kwiCampeonato Paulista AKA Paulistão (Iligi yebhola ekhatywayo yokubaleka ephezulu kwimidlalo yaseBrazil eSão Paulo) waba lelinye ithuba lokuguqula umsebenzi wakhe omncinci. Ubusazi?… Emva kokutyisa ukhuphiswano, uGabriel Martinelli wabamba amabhaso e-3 akumgangatho ophakamileyo wePaulistão. (UCampeonato Paulista oGqibeleleyo omtsha, uMdlali weLizwe oMncinci kunye neQela loNyaka okanye i-2019).
UGabriel Martinelli Road to Fame Ibali- Umvuzo wePaulista 2019. Ityala kwi-Twitter
Nangona wayesemncinci kangaka, uMartinelli wazenzela igama kwilizwe lakhe. Emva nje kwamabhaso, waba ngumdla kumdla ongekho ngaphantsi kweeklabhu eziphezulu ze-25 kwihlabathi liphela owaqala ukucela ukutyikitywa kwakhe. Kuzo zonke iiklabhu, yayiyiArsenal eyayihluza kuqala ukuze ihlangane neminqweno yayo. Ngexesha lokufika eArsenal, iprodigy esencinci yafumana ithuba lokudibana namanye amaqhawe akhe.
"Ndamkelwa ngeyona ndlela. Ndisemncinci kakhulu, ndaba neentloni kancinci. Ndabona abadlali endandinethu kuphela ithuba lokubona kumabonwakude nakwiPlayStation. Bonke bandamkele kakuhle kwaye bandenza ndaziva ndisekhaya”Wongeze emva kokujoyina iArsenal.
UGabriel Martinelli wathabatha amanyathelo akhe okufezekisa amandla akhe ngokufaka umnatha ophindwe kabini ngokuchasene neNottingham Ihlathi. Emva kwegorha lakhe leCarabao Cup, wafumana amanqaku kabini kwi-4-0 rout ye-Standard Liege kwi-Europa League. Jonga ngezantsi isiqwenga sobungqina bevidiyo (iTyala elikwi-AFCVN yeGosa).
Kuyinyani, kukho ukufezekiswa kweenjongo kuye nangona eneminyaka yobudala bakhe. Ngaphandle kwamathandabuzo, abalandeli beArsenal banokuba kwinqanaba lokuba babone umntwana osakhulayo engena kwitalente ekumgangatho wehlabathi phambi kwamehlo. Ukuseta, singathi, yimbali ngoku.
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe ukuba nodumo kunye nokufika eLondon, kuyacaca ukuba uninzi lwabalandeli beArsenal kunye nabaseBrazil kumele ukuba bazibuza ukuba uGabriel Martinelli unentombi na. Inyani yile; sele ethathiwe. kwaye emva kwebhola eliphumeleleyo, kukho intombi entle eqhubeka ngegama URakeli Akemy.
Dibana nentombazana enguGabriel kaMartin Martinelli- uRakeli Akemy. Ikhredithi kwi-IG
Ngenyanga emva kokujoyina iArsenal, uGabriel Martinelli wathabatha amanyathelo ngesibindi njengoko wayezibophelela ekutshatweni (ukubandakanyeka) nentombi yakhe. Le yayiyindlela efanayo yathatyathwa sisithixo sakhe Philippe Coutinho owatshata nentombi yakhe esemncinci kakhulu.
Bobabini uRachel Akemy noGabriel Martinelli abaze baphoswe lithuba lokuthatha iifoto zabo njengoko bendwendwela iindawo ezingafaniyo. I-London tower Bridge yi oNe zezona zinto zifunyanwayo zifumana ukufumana ixesha lokuzonwabisa.
UGabriel Martinelli kunye nentombazana eyintombazana kwi-London's tower Bridge. Ikhredithi kwi-IG
Ukwahlula indlela bobabini abaqhubeka nolwalamano lwabo, kubonakala ngathi umtshato unokuba yinto elandelayo kwinyathelo langaphambili.
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bomntu
Ukwazi uGabriel uMartin ngobomi baBomntu kungakunceda ufumane umfanekiso olungileyo lomntu wakhe.
UGabriel Martinelli Iinkcukacha zoBomi. Ityala kwi-Instagram
Ukuqala, uGabriel Martinelli ngumlo. Ungumntu ophila ubomi obuzimiselweyo nobunqumlayo nangona ejonge ezolile kwaye epholile. Ukuthetha ngeenkangeleko, uMartelli ngokwenyani ubonakala emdala kunaye yonke intobulela ubugqwirha bakhe kunye nokukwazi ukuziqhelanisa noko ebomini kuye.
UMartinelli oyi-18 ngexesha lokubhala unomdla kakhulu ngobomi bakhe bothando. Akaze oyike ukwenza ubudlelwane nentombi yakhe esidlangalaleni njengoko abanye abadlali bebhola abancinci bebengavumi. Ngokwenene olu luphawu lokuzithemba kwakhe nokuba nesibindi.
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi Bentsapho
UMartinelli ongumnxibelelanisi wosapho ngokuzimisela kwakhe wenza indlela yosapho lwakhe lokuzimela geqe kwezemali. Ukuba nelungu lentsapho eliphumeleleyo eliyenzileyo kwibhola ekhatywayo lenze wonke umntu wasekhaya wasondela kwaye wanamathela kumdlalo webhola.
Kwividiyo engezantsi, usapho lukaGabriel Martinelli kubandakanya (izalamane) umntakwabo, udade wabo ongumalume kunye nomakazi wakhe bonke babhiyozela ngaphakathi kwigumbi labo elincinci emva kokumbona amanqaku e-Arsenal. Ityala kwi Ilanga.
Malunga noTata kaGabriel Martinelli: UJoao Martinelli waseBrazil eneengcambu zaseNtaliyane ubulela uMartinelli noMakhulu. Oku kumenza afaneleke unyana wakhe uGabriel Martinelli malunga nokufumana incwadi yokundwendwela yase-Itali kunye nokufumana indawo yokuba nekamva kunye neqela lesizwe lase-Italy. Njengoko kubonisiwe ngezantsi, kukho ukufana okumangalisayo phakathi kotata nonyana.
Dibana noTata kaGabriel Martinelli. Ityala kwi-Instagram
Malunga noMama kaGabriel Martinelli: Incinci iyaziwa ngaye. Nangona kunjalo, kuyaziwa ukuba wazibiza ngegama 'uSilva' ngaphambi kokuba atshate nomyeni wakhe uJoao. Ukujonga le vidiyo ingentla, kubonakala ngathi ngumama kaGabriel Martinelli ngexesha lokubhala usahlala eBrazil kunye nosapho lukaMartinelli.
Dibana noMama kaGabriel Martinelli. Ityala kwi-Instagram
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - LifeStyle
Asides ukuqonda ngobomi bakhe, ukwazi indlela kaGabriel Martinelli ngendlela aphila ngayo kunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo ngobuntu bakhe.
Ngombulelo ngendlela akhule ngayo, uGabriel Martinelli unesiseko esomeleleyo sokugcina imali yakhe ihlawulwe kwaye icwangcisiwe. Njengakwelo xesha lokubhalwa, akukho zimpawu zikaMartinelli zokuphila ubomi obukhazimlayo obonakalayo ngokulula kwesandla kunye neemoto ezibizayo.
UGabriel Martinelli Ubomi beNtsebenzo- Icacisiwe. Ikhredithi kwiGlobeFreak kunye ne-Instagram
Ukwazi kukaMartinelli ukubonelela ngoncedo lwezezimali kumalungu osapho wakhe kuyafana nokuzinikela kwakhe kwisandi.
UGabriel Martinelli Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Inkolo: UGabriel Martinelli wakhuliswa kwikhaya lonqulo lwamaKristu, waya kwisikolo samaRoma Katolika eGuarulhos ngexesha lobuntwana bakhe. Akakufihli ukubulela kuThixo ngexesha lemibhiyozo yakhe yenjongo.
Ukuhlaselwa kwe911 kwenzeka ngonyaka awazalwa ngawo: Ubusazi?… Kuphela yi-3% yabasebenzisi be-Intanethi abaye bafumana ulwazi malunga nokuhlaselwa kwe9 / 11 kwiwebhu. Ngokukodwa ngoSeptemba 11 2001, ezimbini zeenqwelomoya ezaziqhushumbe izilwanyana zase Melika zangena kumawele eWorld Trade Center eNew York ezawa ngokulandelelana.
Inyikima yenzekile ngonyaka awazalwa ngawo: Kwindlela ye ntlekele, inyikima yasendle ilinganisa i-7.9 kwi-Richer wadogo jolted Gujarat of India ngoJanuwari 26, ibulala okungenani abantu be-20,000 kunye nokwenzakalisa abanye be-167,000.
Iiteknoloji ezibalulekileyo zakhutshwa ngonyaka awazalwa ngawo: NgoJanuwari 13, 2001, Wikipedia.org yeza kwi-intanethi. NgoJulayi 2001, iGoogle isungule i- “Image Search” eyaziwayo enikezela abasebenzisi ukufikelela kwimifanekiso engaphezulu kwesigidi se-250. Ekugqibeleni, ngo-Novemba 15, iMicrosoft yakhupha i-Xbox ividiyo yomdlalo wekhonsoli.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu likaGabriel Martinelli Ubuntwana kunye neNqaku leBritold Biography. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
Ibhola leBhola laseBrazil
I-Mikel Arteta Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Mikold
I-Donyell Malen Ibali loBuntwana beNqaku leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography
I-Reiss Nelson Childhood Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku leMbiniso yeWorold
UDani Ceballos Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Kieran Tierney Ibali loBuntwana leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography
I-Achraf Hakimi Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Achold
vannyhenrico - Februwari 27, 2020
Februwari 23, 2020
vannyhenrico - Februwari 27, 2020 0
vannyhenrico - Februwari 23, 2020 0
I-Theo Walcott Ibali leNkcazelo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Oktobha 22, 2017
Oktobha 7, 2018
I-Granit Xhaka yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts
URoberto Firmino Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBriography Facts
UFilie Coutinho Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBriography Facts
Julayi 19, 2017
UDanny Welbeck Ibali leBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo
Februwari 2, 2018